I-china Salmonella Test abakhiqizi nabaphakeli | I-Liming Bio
Ukuzwela okuphezulu (89.8%), ukucaciswa (96.3%) kufakazelwe ngezilingo zomtholampilo ezingama-1047 ngesivumelwano esingu-93.6% uma kuqhathaniswa nendlela yamasiko.
Inqubo yesinyathelo esisodwa, alikho ikhono elikhethekile elidingekayo.
Kudingeka imizuzu eyi-10 kuphela.
Kit Size = 20 izivivinyo
Ifayela: Ama-Manuals / MSDS
I-Salmonella ibhaktheriya ebangela enye ye-enteric ejwayelekile kakhulu (emathunjini) izifo emhlabeni- Salmonellosis. Futhi futhi enye yezinto ezinhle kakhuluizifo ezivamile ezibangelwa ukudla okubangelwa amagciwane zibikiwe (imvamisa zincane kancane kune- Campylobacter ukutheleleka). UTobobdd Smith, wathola uhlobo lokuqala lwe-Salmonella – Salmonella cholerae suis – ngo-1885. Kusukela ngaleso sikhathi, inani lamagciwane (ngokwezobuchwepheshe libizwa ama-serotypes noma ama-serovars) we-Salmonella aziwa ukudala i-salmonellosis ine lenyuke laba ngaphezu kuka-2 300. I-Salmonella typhi, uhlobo olubangela umkhuhlane we-typhoid,kuvamile emazweni asathuthuka lapho kuthinta khona abantu ababalelwa ezigidini eziyi-12.5 njalo ngonyaka, iSalmonella enterica serotype Typhimurium neSalmonella enterica i-serotype Enteritidis nayo iyizifo ezivame ukubikwa. I-Salmonella ingadalaizinhlobo ezintathu ezihlukene zokugula: i-gastroenteritis, umkhuhlane we-typhoid, ne-bacteremia. Ukuxilongwa kweSalmonellosis kuqukethe ukuhlukaniswa kwama-bacilli kanye ne ukuboniswa kwamasosha omzimba. Ukuhlukaniswa kwama-bacilli kudla isikhathi esiningifuthi ukutholwa kwamasosha omzimba akucaci kakhulu.
ISalmonella Antigen Rapid Test ithola iSalmonella ngokubuka ukutolika kokuthuthukiswa kombala emgqeni wangaphakathi. I-anti-salmonellaamasosha omzimba ahanjiswe esifundeni sokuhlolwa selwelwesi. Ngesikhathi sokuhlolwa, i-isampuli liphendula ngama-anti-salmonella antibodies ahlanganiswe nezinhlayiya ezinemibala futhi ifakwe ngaphambili kuphedi yokuhlangana yesivivinyo. Ingxube bese iyafudukangokusebenzisa ulwelwesi ngesenzo se-capillary futhi ihlangana nama-reagents ku- ulwelwesi. Uma kune-salmonella eyanele ku-specimen, ibhendi enemibala izokwenza njaloifomu esifundeni sokuhlola se-membrane. Ukuba khona kwaleli bhande elinemibalaikhombisa umphumela omuhle, kanti ukungabikho kwayo kukhombisa umphumela ongemuhle. I-ukuvela kwebhande elinemibala esifundeni sokulawula kusebenza njengokulawulwa kwenqubo, okukhombisa ukuthi ivolumu efanelekile yesampuli ingeziwe nolwelwesi ukukhothama kwenzeke.
Langaphambilini Ukuhlolwa kweRotavirus
Olandelayo: Ukuhlolwa kwe-Vibrio cholerae O1
Isivivinyo Esisheshayo Salmonella Antigen
Isivivinyo Esisheshayo Salmonella Typhi Antibody
Isivivinyo se-H. pylori Antibody
Inoveli Coronavirus Rapid Test Ket, H. Pylori Ag Ukuhlolwa Okusheshayo Kuthola I-Antigen, Ikhithi Yokuhlola ye-Igm / Iggrapid, ICoronavirus Yokuhlolwa Kwe-Covid-19, ICoronavirus Antigen Test Kit, IVibrio Cholerae O1 / O139 Ukuhlolwa Okusheshayo Kwe-Antigen Combo,